जवाफ र एप्पल वाच फोन गर्न कसरी
अप्रिल 14, 2020 द्वारा फेसटाइम गाइड एक टिप्पणी छोड्नुहोस्
तपाईं हामी कोही हाम्रो कलाई सिधै कल गर्न सक्छ जब कहिल्यै दिन आउनेछ आंकडा गर्नुभयो? बिना यो काल्पनिक विज्ञान बनेको छ कि सामान देखिन्छ, तर तपाईं, वास्तवमा, बनाउन र फोन कल प्राप्त स्याउ वाच. एप्पल वाच, कल आईफोन मार्फत steered छन्, अझै तपाईँ अर्को कोठा मा आफ्नो iPhone संग पनि जवाफ वा खल्ती मा लुकाइन् गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो घडी बाट सिधै सारा चर्चा मा पूरा.
1 एप्पल वाच एक कल जवाफ
2 एप्पल वाच एक कल बनाउने
एप्पल वाच एक कल जवाफ
कल आउँछ जब बिन्दुमा, तपाईं बस हरियो जवाफ ट्याप गर्नुहोस् गर्नुपर्छ. घटनाको भनेर जवाफ गर्न रुचाउनु हुनेछ, तपाईं रातो गिरावट ट्याप गर्नुहोस् र आवाज सन्देश कल पठाउन सक्नुहुन्छ.
तपाईं पनि त्यसै दृष्टिकोण आफ्नो iPhone जवाफ वा तत्काल सन्देश पठाउन निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ. कल आउँछ जब बिन्दुमा, यी विकल्पहरू प्राप्त गर्न माथिको डिजिटल क्राउन वा स्वाइप बारी.
तपाईं आफ्नो एप्पल वाच प्रारम्भिक शान्त गर्न भेला बेवास्ता वा साधारण व्यस्त र छन् घटनाको, तपाईं तेजी तीन सेकेन्ड को लागि आफ्नो हातको हत्केलामा संग एप्पल घडीको प्रदर्शन कवर गरेर आउँदै कल ध्वनि शान्त गर्न सक्नुहुन्छ. त्यस बिन्दु ट्याप मा शान्त शक्ति छ भनेर अभिवचन गर्न.
एप्पल वाच एक कल बनाउने
तपाईं डिजिटल क्राउन तल छेउमा बटन धक्का आफ्नो पसंदीदा सूची मा मानिसहरूलाई टेलिफोन कल गर्न सक्छन्. कि बिन्दुमा, डिजिटल क्राउन बारी वा चयन गर्न एक मानिसहरूको हस्ताक्षरहरू ट्याप गर्नुहोस्. कि बिन्दुमा, आधार मा कल प्रतीक स्क्रिनको कुना बाँकी ट्याप.
बंद मौका मा तपाईं छैन आफ्नो पसंदीदा सूची मा जो कल कोही गर्न आवश्यक छ कि, एप्पल देखो फोन आवेदन ट्याप गर्नुहोस् र तपाईं कल गर्न चाहनुहुन्छ सम्पर्कमा मा प्राप्त गर्न डिजिटल क्राउन वा स्वाइप बारी. त्यसै गरी तपाईंले सिरी भन्दै द्वारा तपाईंको लागि टेलिफोन कल अनुरोध गर्न सक्छ “कल” र तपाईंको सम्पर्क ठहरनेवाला मा कुनै नामकरण. सिरी लागि टेलिफोन कल गर्नेछन्.
एप्पल वाच कुरा सुरु देखि केहि असामान्य महसुस, र तपाईंले यसलाई गाह्रो हुन त्यहाँ होहल्ला आसपास हुँदा एप्पल वाच वक्ता देखि कुनै सुन्न tends देखि खुला यो एक रणनीतिक दूरी कायम गर्नुपर्छ. एक दृष्टिकोण स्वीकार स्याउ वाच छ, कुनै पनि मामला मा, extraordinarily घटना उपयोगी तपाईं कुनै संग Converse गर्न आवश्यक र आफ्नो iPhone नजिकै छैन भनेर. यसबाहेक, तपाईं दृष्टिकोण एप्पल वाच जवाफ दिन सक्नुहुन्छ, आफ्नो iPhone गर्न आवश्यक रही रूपमा धेरै समय लाग्न, तपाईं तयार गर्दा र अनिवार्य भन्दा स्विच. कुनै थप छुटेका कलहरू.
यस लेखमा बारेमा पूर्ण जानकारी समावेश जो जाँच जवाफ र एप्पल वाच फोन गर्न कसरी बिना जोडा आईफोन गर्न. ध्यान दिएर लेख पढ्न र सजिलै जवाफ र बनाउन फोन कल गर्न प्रक्रिया बताउँछन् जो प्रक्रिया पालना.
Filed Under: डाउनलोड फेसटाइम Tagged With: जवाफ र एप्पल वाच फोन गर्न कसरी